Ganaraalkii ugu horeeyey ee farmaajo darajada ka rifay lana ruqseeyey oo noqday N.N.S | Somalisan.com
Home Afsomali Ganaraalkii ugu horeeyey ee farmaajo darajada ka rifay lana ruqseeyey oo noqday...
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka dhigay dhammaan darajooyinkii ciidan, kana ruqseeyay hay’adda nabad sugidda iyo Sirdoonka QarankaSarreeye Guuto Cabdalla Cabdalla Maxamed keddib soojeedin ka timid Agaasimaha Guud ee Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka.
Warqadda soojeedinta ah oo Madaxweynaha kasoo gaartay Xafiiska Agaasimaha Guud ee Hay’adda Mudane Xuseen Cismaan Xuseen ee loo cuskaday go’aankan ayaa lagu caddeeyay in sarkaalkan uusan kasii mid ahaan karin hay’adda iyada oo la tix raacayo go’aankii ay gaareenguddiga anshaxa.
“Sarreeye Guuto Cabdalla Cabdalla Maxamed waxaa laga dhigay dhammaan darajooyinkii ciidaan, isla markaana waxaa laga ruqseeyay hay’adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaliyeed sababo la xiriira xadgudub sharciga ciidamada qalabka sida iyo xeer hoosaadkaHay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka.” Ayaa lagu sheegay wareegtada.
Previous articleMadaxweyne ku xigeenada galmudug iyo puntland oo kobaha la dul marey qodobadii ka soo baxay shirkii kismaayo
Next articleRa’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre Waa ognahay Michael Keating dareenkaaga
Ra’iisul wasaare danbi dil ah loo heysto oo ku andacooday Inta uu...
Somalisan News - February 25, 2020
SOMALIA TRADE MARK – NOTICE IS ALSO GIVEN